ukufunxa kumabala | Ndlela Best mhlophe Amazinyo Guide
izithuba ephawulweyo "ukufunxa kumabala"
Ingaba ikhona indlela ekhuselekileyo ukufumana uncumo mhlophe? Asizizo zonke eyona okanye onokuthenjwa. Eli nqaku liza kubonelela ezinye amazinyo ebalaseleyo ngenkathalo kunye nokuchulumacha.
Inyathelo lokuqala ukuba mhlophe, amazinyo eliqaqambileyo yinto elungileyo, ukucocwa yobungcali. cleanings zamazinyo kufuneka ibe yesiqhelo, apho ubekela ukuqeshwa nganye qho kwiinyanga ezintandathu. nokuba, ukucocwa oqeqeshiweyo rhoqo kulula ngoyaba kodwa idla igqunywe ziintlobo ezininzi inshorensi zamazinyo.
ICEBISO! Emva kokuba mhlophe amazinyo akho, ulumke into yokusela okanye yokutya. Baya ukufunxa amabala nemibala lula esinokubangela gqwanci.
Laser ziwenza yenye inkqubo isebenzayo ukuba unako ukuvelisa iziphumo ngokukhawuleza. Oku kuya kuba yeyona ndlela ibhetele ukuba amazinyo akho babuyele emva abamhlophe yabo yokuqala njengoko kunokuba. A isisombululo isithambiso na aqatywe kwi amazinyo akho, ngoko laser isetyenziswa ukuze isebenze. Amazinyo ingena ubuncinane ezintlanu okanye ezintandathu ezikhanyayo.
Kubalulekile ukubandakanya iziqhamo ekrwada nemifuno kwisidlo sakho, ukunceda ukugcina amazinyo akho womelele kwaye usempilweni. ukutya okunamafutha ukwandisa amathuba nemingxuma kwaye kunokubangela gqwanci amazinyo akho. Kuphephe ezi iindidi zokutya kuba enokuqoba impilo amazinyo akho. Kufuneka kwakhona ukuphepha rhoqo kushwamza xa esijolise kuzo ngoncumo esempilweni.
ICEBISO! Kuphephe iziselo amazinyo-nizikhwebule xa ukhangela amazinyo amhlophe. Ezi ntlobo yeziselo ziquka coke, ikofu neti abamnyama.
Kufuneka balumke xa ukutya okanye ukusela emva kokuba amazinyo mhlophe. amazinyo mhlophe uya ngokulula ukufunxa imibala okanye amabala ezahlukeneyo ukusuka ukutya neziselo. Hlalani kude ukutya mnyama okanye nizikhwebule neziselo emva kokuba uye amazinyo akho ziye mhlophe. Ikofu umzekelo into eza ukufunxwa amazinyo akho kunokubangela inguqu umbala.
Zama ukusela nge straw ukunceda amazinyo ahlale emhlophe eqaqambileyo. Ukusebenzisa straw kwenza kungabi lula ukuba iziselo ungade uyibhebhethe ndasidyobha amazinyo akho. Ulwelo iza kukhweza ecaleni amazinyo akho uze uhle nomqala wakho.
ICEBISO! A ziwenza ngobuchule eninzi, kodwa mhlawumbi yeyona ndlela ingcono ukuqala ezingwevu amazinyo akho. Nangona le ndlela eninzi kakhulu, inika amava ngcono nangokukhawuleza ezingwevu ngaphezu kwezinye iindlela.
Iziqwenga emazinyweni mhlophe zifumaneka lula kuyo baze nazo ngokufanelekileyo mal. Ezi iziqwenga zisebenza ngokucoca amabala komhlaba ukusuka amazinyo akho iikhemikhali luphathwa imicu them.Whitening mhlophe balahlekelwe ukuthandwa kutshanje, kuba aluboneleli ezingcono iziphumo.
Kubalulekile ukuba xa uza amazinyo akho mhlophe, qho emva kokutya kufuneka uhlambe amazinyo akho. amasuntswana ukutya okuseleyo kungakhokelela ekukhuleni ziibhakteriya phezu komhlaba amazinyo akho. Ukuba awunalo ukuvumela amazinyo akho ukuba lukhuni umva ukuya, iintsholongwane kunokubangela ezininzi iingxaki, ngoko ke qinisekisa sivasa.
ICEBISO! Xa abafuna ngoncumo emhlophe kwangoko, ufuna ukutyelela ugqirha wakho ngoko nangoko. Nanini na uzama ukufumana uncumo mhlophe, uyabaleka esichengeni ebangela umonakalo endaweni yokwenza utshintsho ezintle.
Kufuneka sinikele ingqalelo nayiphi Luvelwano ezingwevu unyango. Kunokuba kakhulu buhlungu kwaye kube lixesha elifutshane kodwa nangoku kubuhlungu. Ukuba oku kwenzeka, qinisekisa ukuba ubona wamazinyo phambi kokuba uqhubeke ukusebenzisa imveliso ezingwevu. Ukuze nazi malunga ukhetho ezahlukeneyo akusayi kuchaphazela oku amazinyo akho.
Ukutshaya kunye amazinyo ziwenza azisebenzi kunye. Ukuba ufuna amazinyo entle emhlophe, kuya kufuneka ukuba uyeke ukutshaya. Xa uchitha imali kwi unyango ezingwevu ugcine ukutshaya, yinto inkunkuma imali. Yonke loo msebenzi ukuba mhlophe amazinyo akho ziya kulahleka xa uyatshaya.
ICEBISO! Phambi amazinyo ekuqaleni ziwenza, ukuncokola wakho wamazinyo. Ukuba uyazi ukuba kuza kufuneka ezinkulu umsebenzi wamazinyo wenziwe kwixesha elizayo, kulibazisa amazinyo akho ezingwevu nkqubo de umsebenzi sele ugqityiwe.
Gcina ibhrashi ukusetyenziswa enye zinokugcinwa kude xa wena utye ilekese okanye ezinye iilekese. Ezi ukutya ukuze babambelele amazinyo akho lula, kwaye ungaqalisa nolo tshaba. Emva ulonwabele elithozamisayo, athathe emzuzwini okanye emibini uhlamba amazinyo akho. Intlama ayifuneki ukuba nithe ukhuhle amazinyo akho uze uzifake kakuhle.
Cebetshu intlama amazinyo ezingwevu. Nangona ezi toothpastes azikho enamandla nezinye whiteners, Baya kususa naziphi kumabala yakutshanje nokukhusela amazinyo akho ukusuka kumabala ezintsha. Ezi toothpastes ziqulathe isisikhuhli wobulali ezenziwe dust eya kusebenza ngaphandle kokonakalisa ulandelise.
ICEBISO! Kubalulekile ukuba ukuhlamba, itshungama yokuthanjiswa, nokuvungula kabini ngemini ubuncinane. Amazinyo akho uya kuhlala mhlophe kakhulu ukuba ukuxukuxa nokuvungula lonke ixesha unayo isidlo okanye yokutya.
Ukupulisha umlomo wakho emva usela okanye ukusela. Amazinyo akho uya kuhlala mhlophe ukuba akukho ixesha ukucoca emva odlayo ukutya okanye usele. Oku kunokunceda ukuthintela amabala kunye nemingxuma.
Usebenzisa iipeni amazinyo ezingwevu kunokukunceda mhlophe amazinyo akho. nokuba, kubalulekile ukuba sikulumkele yokuzisebenzisa, ngokuba asebenza bleach. Ukufumana ezingcono iziphumo kule ndlela, ufuna ukwenza isicelo ngononophelo kwaye uphephe overdoing ngayo.
ICEBISO! Ezinye toothpastes ezingwevu azikho bonke bathi. Basenokuba uncedo mhlophe amazinyo akho, kodwa ngcono ezisetyenziswa kunye nezinye izicwangciso.
Ufuna ukuya kugqirha wamazinyo ukuze ufumane amazinyo akho zicocwe amaxesha ubuncinane kabini ngonyaka. Cela ofisi ibe nako ukuqhagamshelana nawe malunga neveki phambi kokuba aqeshwe yakho kufuphi.
Thetha wamazinyo yakho malunga ndlela zinempilo mhlophe amazinyo akho phambi kokuba ndithenge nantoni na. ugqirha wakho ndikuxelele izinto kakuhle imeko yakho na, ndakuqononondisa ngemiphumela.
ICEBISO! Yakha nokuvungula kungena regimin yakho. Nokuvungula yonke imihla inceda lokuphelisa umlomo wakho neplaque, leyo yenye oonobangela amazinyo abe gqwanci.
amanzi okusela rhoqo kuya kukunceda amazinyo amhlophe. Uhlambisise ngamanzi yindlela elungileyo ukuthintela amabala kwi appearing.Make umkhwa ukuba usele amanzi nokutya kunye ngethuba lezidlo.
Iwayini kunye nesoda ukuba utshaba lwakho kunxano lwakho amazinyo amhlophe. Ezi iziselo uyakwazi angcolise okanye discolor amazinyo akho. Kuyimisela iziselo ezisempilweni. Ukuba ufuna ukusela ezi ziselo kunjalo, qinisekisa ukuba uhlambe amazinyo akho ngokukhawuleza ukunciphisa isiphumo nizikhwebule.
ICEBISO! Ixolo umthi walnut ingasetyenziswa ngobunono eshaweni kude mdaka amazinyo akho. Ukusebenzisa le amaxolo rhoqo uyakwazi ukususa ezi amabala kunye gqwanci yellow ngokuqhelekileyo ibonwa kutshaya okanye ukusela athile.
Iziqhamo Veggies kunye ukungqinelana uboya ingasetyenziswa eshaweni ngokwendalo amazinyo akho. Ezinye ukutya lizakusebenza brokholi, netyhukhamba, iminqathe, kunye neminqathe. Zama swish ukutya emlonyeni wakho ukuba indawo ngaphezulu wazigquma.
Tofa izinto zobisi ngaphezulu ukutya kwakho. Strong, amazinyo esempilweni kunganxulunyaniswa izondlo ukutya ezifana namasi, ubisi kunye netshizi. Ezi izimbiwa kwanokuphucula ulandelise ngamazinyo akho, leyo eyenza amazinyo akho ngaphantsi semngciphekweni ukutya kunye nezinye izinto eziye kunokubangela gqwanci. Oku kuthetha ukuba kuquka ukutya afana nala ukutya kwakho kuya kukunceda ukuba uncumo ukuba mhlophe.
ICEBISO! amayeza ekhaya kokufumana amhlophe mazinyo bakholisa ukuba icala ezantsi–ke ngamanye amaxesha kunokukhokelela enovakalelo, iintsini adumbileyo ukuba zixhomekeke ukopha. Musa ukuthandabuza qhagamshelana ugqirha wakho xa kukho le miba zamazinyo.
Iintsholongwane iya kukhula macala emlonyeni wakho emva kokuba utyile. Ukuba awunalo ukuvumela amazinyo akho ukuba lukhuni umva ukuya, iintsholongwane kunokubangela ezininzi iingxaki, ngoko ke khumbula ukuhlamba kubo.
Kuphephe iziselo ezimnyama kunye neziqhamo ukugcina amazinyo akho amhlophe. iziselo ezithile, ezifana newayini ebomvu nekofu, bangazishiya mdaka amazinyo akho. Ukuba ngokulula awukwazi ukunika la iziselo, ithamo ngokusebenzisa straw aukugqithisa isiphumo nizikhwebule.
ICEBISO! Ukuba mhlophe amazinyo akho unako uhlambe ngokulula nabo peroxide Cola kunye nesoda yokubhaka. Zombini ezi zinto izithako ezininzi toothpastes zorhwebo ezingwevu, ukanti inokufumaneka ipentri wakho ekhaya.
Ezi zizinto zinokubangela kumabala ezinzulu amazinyo akho. Ukuba kufuneka usele ikofu okanye iti, ungasebenzisa straw nokuwasela, uhlamba amazinyo akho emva kokugqiba indebe yakho, okanye amazinyo ibrashi ngokukhawuleza emva kokuba sigqityiwe ethululwayo lakho. Ukusela iti nekofu, kunye nokutshaya, ke ezinegalelo elikhulu discoloring amazinyo abantu.
Sebenzisa iyeza yemvelo ukuba mhlophe amazinyo akho, ezifana apile cider iviniga. Oku kubonakele ukuba ukususa amabala nokuphelisa iintsholongwane emlonyeni abo. Ukuba ukusebenza kunye nonyango, rharhaza imihla iviniga, kusasa kukhetheka, ngoko abuzise kunye yokuxukuxa amazinyo.
ICEBISO! Khetha ibrashi ekunene. Thetha wamazinyo yakho ukufumana iingcebiso wakhe koko ibhrashi kufuneka ukhethe.
Kukho whiteners amazinyo endalo ukuba nibe nako ukufumana phandle endaweni ukuthenga kubo, oko kongela imali. Ixolo lomthi walnut yeyona unyango obalaseleyo kusetyenziswa mhlophe amazinyo. Fumana kwexolo lomthi, nesephu kakuhle kwaye lukuhlikihle amazinyo akho ngayo. Oku isebenzela ukususa amabala kunye ukubola.
Kufuneka wazi ukuba nasiphi na isisombululo ziwenza mhlophe kuphela amazinyo endalo. Ukuba ilifa veneers, ezifana izithsaba, kwiziseko, veneers okanye ezinye iintlobo zomsebenzi wamazinyo emazinyweni phambili phambi, baya kuhlala umbala omnye. Ezingwevu amazinyo endalo kunokubangela umsebenzi wamazinyo ukuba sele bekwenzile kungavela kakhulu.
Dibana wamazinyo wakho okanye ugqirha phambi ngokukhetha mhlophe amazinyo akho. Musa ukuqala ezingwevu amazinyo akho ukuba wenze nayiphi na eminye imiba.
INew Kulula ukubona kuba abo mdaka tyheli emazinyweni. Kunokuba kunokuba nzima ukugcina uncumo mhlophe ukuba uyatshaya. Ukuba kufuneka utshaye, kufuneka unciphise impilo yakho kunye ukubonakala amazinyo akho.
Sebenzisa icala yangaphakathi Ixolo orange ukuba lukuhlikihle amabala kwaye wenze amazinyo akho amhlophe. Unako kwakhona kuxutywa watsha amaxolo-orenji kunye amagqabi bay emhlabeni ukwenza enuka toothpaste.Make qiniseka ukuba ukupulisha umlomo wakho xa ugqibile ihlamba ukususa yonke iswekile iziqhamo extra.
Hlalani kude mouthwashes ezinemibala njengoko ziqulathe colors.Mouthwashes kongezwa equlathe iidayi ukongeza umbala kunokubangela gqwanci engafunwayo ukuvela amazinyo akho.
Ihlamba amazinyo wakho umlinganiselo omhle zokhuselo. Usenokukwazi ukufumana ezinye intlama eyenziwe ngokukodwa ukuba mhlophe amazinyo akho. Zininzi iindidi ezahlukeneyo, ukuze uphando kubo kukunceda ufumane enye sikusebenzelayo amazinyo akho.
Zama ekuphuculeni impefumlo yakho ukufumana uncumo mhlophe. Vavanya impefumlo yakho wayimunca yinxalenye ecocekileyo esandleni sakho. Ukuba uyakwazi ivumba ngamathe, sebenzisa zetyeleba okanye acoce. Ukuba kuhamba acoce, ukuqinisekisa ukuba utywala-free ukuphepha yaphuse umlomo wakho.
amazinyo ezingwevu iintlantsi ubanzima ingxoxo. Kuyathenjwa ukuba emva kokufunda eli nqaku ukuba uya kuzithemba nangakumbi ukuphumeza ezinye yeengcamango ngenxa ezingwevu amazinyo. Sebenzisa olu lwazi ukuphucula ngokukhuselekileyo umbala wakho izinyo.
Ngeposi yi mhlophe Amazinyo Guide - Isilimela 5, 2016 nge 12:56 AM
iindidi: Lwasekhaya mhlophe Amazinyo tags: ukufunxa kumabala, Qambisa uncumo lwakho, cleanings zamazinyo, Laser ezingwevu amazinyo, inkathalo amazinyo, amhlophe mazinyo, tips amazinyo amhlophe, mhlophe amazinyo akho, uncumo mhlophe